Olee otú iji tọghata M2TS / MTS ka VOB?
> Resource> tọghata> Olee otú iji tọghata MTS / M2TS ka VOB?
Ò nwetụla mgbe ị gbalịrị iji tọghata M2TS / MTS ka VOB ọkụ n'ime a DVD diski? Ee, ọ bụ obi abụọ adịghị oké echiche ndị ahụ ọkụ gị na-agbata n'ọsọ M2TS / MTS footages dekọrọ camcorders n'ime a DVD diski iji na-dị oké ọnụ ahịa na ebe nchekwa ruo mgbe ebighị ebi ma ọ bụ zipu enyi dị ka a onyinye pụrụ iche.
N'ezie, ọ bụrụ na gị ikpeazụ mgbaru ọsọ bụ-a playable DVD, ị na-adịghị iji tọghata M2TS / MTS ka VOB dị ka nzọụkwụ mbụ. Ị nwere ike iji a dị ike DVD Onye Okike ngwá ọrụ iji kpọmkwem-enyere gị aka tọghata M2TS / MTS ka DVD na ala. Nke a smart ngwa - DVD Creator nwere ihe abụọ nsụgharị. Dị nnọọ họrọ otu dị ka gị ọrụ usoro.
Rịba ama: Dị nnọọ chọrọ iji tọghata M2TS / MTS ka VOB? Ọ bụrụ otú ahụ, a smart Video Ntụgharị bụ ezuru windows ọrụ ịgbanwe video formats, mgbe maka Mac n'anya, Video Ntụgharị maka Mac bụ ịrụ ụka adịghị gị mma M2TS / MTS ka VOB Ntụgharị iji tọghata M2TS / MTS ka VOB Mac.
N'okpuru ebe a bụ nkuzi na Olee otú iji tọghata M2TS / MTS ka DVD na ndabere nke windows n'elu ikpo okwu.
1. Import M2TS / MTS faịlụ ka usoro ihe omume
Mgbe echichi, na-agba ọsọ smart DVD Creator maka Windows. Mgbe ahụ ị chọrọ mbubata M2TS / MTS faịlụ maka DVD na-enwu. N'oge a, ị nwere ụzọ atọ ime nke a.
1. Dọrọ & dobe M2TS / MTS faịlụ ka usoro ihe omume.
2. Pịa "+ Import" button ka ịgbakwunye M2TS / MTS videos.
3. Ọzọkwa, ị pụrụ aga "File"> "Tinye Files" ịgbakwunye M2TS / MTS faịlụ na ị chọrọ ka ọkụ.
2. hazie n'okirikiri na foto gị na DVD
See akara ngosi na-gbapụta na "hazie" window, ebe ị ga-ahụ abụọ na taabụ: "Mụrụ" na "Mụrụ Music". See "ndabere" taabụ iji tinye ndabere oyiyi maka DVD menu, mgbe họrọ ọzọ taabụ ịgbanwe ndabere music. Ọ bụrụ na ị na-atụ anya gị DVD menu music nwere ichabo-na na-agwụ-esi mmetụta, dị nnọọ tinye akara "Adalata" na "ịjụ oyi si" nhọrọ.
3. Malite isure M2TS / MTS ka DVD
Pịa "Ọkụ" na họrọ mmepụta format na ndekọ na popping-elu ndepụta. Mgbe ahụ kụrụ "Malite" ka smart ngwa-eme ndị ọzọ ihe unu. Ọ bụ nnọọ mfe, ọ bụghị ya?
Site n'enyemaka nke ndị ọkachamara DVD Creator maka Windows, ị nwere ike ọkụ gị kwesịrị ncheta M2TS / MTS camcorder faịlụ n'ime DVD. N'ụzọ dị otú a, na-echebekwa ụtọ na-echeta bụ agaghịkwa a siri ike nke.
Dezie MTS / M2TS Files: Mụta otú dezie MTS / M2TS faịlụ, gụnyere ọnwụ, merging, n'usoro n'usoro, cropping, na-agbakwunye PIP, music, ederede na ndị ọzọ.
Jikọọ MTS / M2TS Files: Jikọọ MTS / M2TS faịlụ mfe na ngwa ngwa na ike MTS / M2TS joiner.
Tọghata MTS / M2TS ka VOB: Chọrọ iji tọghata M2TS / MTS ka VOB ọkụ n'ime a DVD diski? Ewere ya na ya mere ebe a.
Tọghata MTS ka fọrọ nke nta ọ bụla Format: Dị nnọọ eso zuru ezu nzọụkwụ ebe a iji tọghata MTS ọ bụla usoro.
Olee otú iji tọghata Canon MTS M2TS Files ọ bụla Format ọsọ ọsọ na mfe
MP4 Ntụgharị - tọghata MP4 na ma ọ bụ ihe ọ bụla na Video na ala
Tọghata Audio ma wepụ MP3 si Video na MP3 Ntụgharị